किन र कसरी गरिन्छ शवको पोष्टमार्टम ?
Saturday, 22 Sep, 2018 7:32 AM
आकस्मिक वा शंकास्पद रुपमा मानिसको मृत्यु भएमा मृत्यको कारण पत्ता लगाउन पोस्टमार्टम गरिन्छ । अन्य कारणबाट मृत्यको कारण पत्ता नलागेमा अन्तिम विकल्पको रुपमा फरेन्सिक विशेषज्ञ डाक्टरहरुले शवलाई विभिन्न कोणबाट चिरफार गरी भित्री र बाह्य अंगको अध्ययन र परिक्षण गरेर मृत्यको कारण पत्ता लगाइन्छ । पोस्टमार्टम भनेको ‘पोष्ट’ अर्थात पछाडी ‘मार्टम’ अर्थात मृत्युको कारण पत्ता लगाउने भन्ने हुन्छ । अर्थात मृत्युपछि मृत्युको कारणबारे पत्ता लगाउन गरीने अध्ययन नै पोस्टमार्टम हो । तर नेपालमा अझै पनि पोस्टमार्टम जस्तो संवेदनशील कार्य गर्ने फरेन्सिक चिकित्सा शास्त्रको पहिचानसम्म नगरिएको र उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको फरेन्सिक विशेषज्ञहरुको गुनासो छ ।
किन गरीन्छ पोष्टमार्टम ?
फरेन्सिक चिकित्सा शास्त्रको उद्धेश्य नै अदालती कामकारबाहीका लागि शंकास्पद मृत्यु भएकाहरूको शरीर चिरफार गरेर मृत्युको कारण पत्ता लगाउन सहयोग गर्नु हो । कसैको हत्या भएको हो या भवितव्य या अन्य कुनै रोगका कारण हो या प्राकृतिक हो पत्ता लगाउने जिम्मा फरेन्सिक विशेषज्ञकै हुने गर्छ ।
कसरी गरीन्छ पोष्टमार्टम ?
पोस्टमार्टमको प्रक्रियामा सर्वप्रथम शवको निरिक्षण गरिन्छ । कहीँ चोट लागेको छ भने चोटको गहिराइ लम्बाइको नाप लिइन्छ । पोस्टमार्टम गर्दा टाउकोको हड्डीलाई झिकेर मस्तिकको जाँच गरिन्छ । त्यसपछि मुखदेखि कम्मरसम्म चिरेर भित्रको सबै अंगको जाँच गरिन्छ र सबै अंगको प्याथोलोजी जाँचको लागि नमुना संकलन गरिन्छ । त्यसैको रिपोर्टबाट मृत्युको कारण पत्ता लगाउने गरीन्छ । सबै प्रक्रिया तिन चरण, टाउको छाती र पेट चिरेर अध्ययन गरीने चिकित्सकहरु बताउँछन् ।
नेपालमा पोष्टमार्टमको अवस्था
नेपालमा पोस्टमार्टमको इतिहास वीर अस्पतालबाट शुरु भएको थियो । निकै अव्यवस्थित र कमजोर व्यवस्थापनका कारण १८ वर्षअघि महाराजगञ्जस्थित शिक्षण अस्पतालमा स्थानान्तरण गरीयो । तर अझै पनि शिक्षण अस्पतालमा पोष्टमार्टम कक्षको अवस्थामा कुनै सुधार आएको छैन । समस्या पोष्टमार्टम कक्षको अवस्थामा मात्र होइन पोष्टमार्टम गर्ने फरेन्सिक विशेषज्ञ डाक्टरहरुको अभाव छ शिक्षण अस्पताललाई । नेपालमा पोस्टमार्टमको लागि चाहिने उपकरण, जनशक्ति, प्याथोलोजी ल्याब, शव राख्ने फ्रिजलगायतका आवश्यक पूर्वाधारको उचित व्यवस्थापनमा सरकारले चरम बेवास्ता गरीरहेका छ । २०७२ साल बैशाख १२ को भूकम्प अगाडी १८ वटा शव अटाउने क्षमता थियो । भूकम्पपछि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका फरेन्सिक विभागलाई शव राख्नको लागि १ सय ५० शव अटाउने फ्रिज आईआरसिएस (रेडक्रस)ले निर्माण गरीदिएपछि केही राहत मिलेको छ । प्रत्येक जिल्लामा पोष्टमार्टम गरिने भए पनि देशभरी जम्मा ७ जना मात्र फरेन्सिक विशेषज्ञ डाक्टर रहेका छन् । विशेषज्ञलाई सहयोग गर्ने सहयोगी एकजना पनि नभएको बरिष्ठ चिकित्सकहरुको भनाइ छ । दैनिक ५ देखि ७ वटा शवको पोष्टमार्टम गर्नुपर्ने भएकाले विभिन्न किसिमको संक्रमण हुने जोखिम पनि हुन्छ । अहिलेसम्म पनि शिक्षण अस्पतालको फरेन्सिक विभागको आफ्नै प्याथोलोजी ल्याब छैन । जसले गर्दा एक घण्टामा सकिने पोष्टमार्टमलाई एक दिनसम्म कुर्नु पर्ने बाध्यता छ ।